Iwo Akanakisa Wiricheya | Karman® Mawiricheya
Iwo Akanakisa Wiricheya Mavhiri
Posted on November 23, 2018 November 20, 2020 by csr 1687
Kune vazhinji mhando mavhiri e mavhiripu dzinoshandira zvinangwa zvakasiyana, saka vhiri rakanakisa rinotemerwa zvichienderana nechinangwa icho munhu chaanoda. Izvo zvakasiyana mhando yemavhiri anogona kuiswa muzvikamu semweya wekubata matai, akasimba matai, uye akapfa mahara ematai. Pneumatic matai ndeaya ane chubhu yemukati inofemerwa. Matai akasimba akasungirirwa pamupendero uye ari akaita kubva kuzvinhu zvakaita Rubber kana mapurasitiki ayo anoita kuti igare uye ingangoita maintenance mahara. Mataya emahara akapetwa akafanana neese ari maviri. Vakafanana netayi ine mweya. zvisinei, iyo chubhu yemukati haina kuzadzwa nemhepo asi izere nefemi-yakasimba furo kana rabha.
Pneumatic matai akanyanya kunaka wiricheya vashandisi vanoda kukwirisa kumatunhu akasiyana siyana. Nekuda kwemhepo yakazadzwa chubhu yemukati, inobatsira kupinza zvinotyisa kubva kumatya anotasva achibvumira iyo wiricheya mushandisi kuva nerwendo rwakasununguka. Zvisinei, kune zvakaderera kune izvi mhando mavhiri. Sezvo ivo vakapfava kupfuura mamwe mavhiri ivo vanonyanya kuomarara kupfuura akasiyana terrains. Kana iri mawiricheya emagetsi nematai emweya, bhatiri rinogara kwenguva shoma nekuda kwesimba rekuwedzera rinodiwa kufambisa iyo wiricheya.
Matai akasimba ndeimwe yematai akajairika anoshandiswa pairi Chichemo chemaoko uye anoshandiswa pane zvakatsetseka nzvimbo. Iwo akanyanya kuomesa ayo anokonzeresa kukakavara kudiki kana achitenderera uye anoita kuti zvive nyore kuendesa pane zvakatsetseka nzvimbo. Ndiro vhiri rakasimba kwazvo rinowanikwa vanoshandisa wiricheya uye zvakajairika nekuda kwekuti ivo havadaro inoda yakawanda yekuchengetedza. Iyo yakadzika kune idzi mhando yemavhiri ndeyekuti iwo akaomarara kune akasimba nzvimbo nekudaro anodzikamisa iyo kufamba yemushandisi. Izvo zvakare hazvisi zvekuvhunduka zvinopinza izvo zvinokonzeresa iyo wiricheya mushandisi kuti anzwe kusanzwisisika kana akatasva pane zvakatsetseka nzvimbo nemabhomba.
The yekupedzisira mhando vhiri ndiyo flat freewheel unova musanganiswa wemavhiri maviri apfuura ataurwa pamusoro. Izvo zvakanaka kumatunhu ane mabhureki nekuti anokatyamadza uye inopa a kutasva kukwira pasina kumhanyisa njodzi yekutora tai nekuti haina mweya nemhepo. Inogona kushandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana nekuti iine kugadzirwa kwekunze izvo zvinodzivirira kubva pakubatika. Kunge tayi yemweya, haina kunyatso simbisa izvo zvinoita kuti zviome kufambisa.
Gumbo rakanakisa raizove iro rinobatsira munhu munzira yakanakisa yekuwana zvakanyanya kufamba to yose basa ravo rezuva nezuva uye vanonakidzwa nehupenyu.
Nyika yako ine hushamwari zvakadii kune vanoshandisa wiricheya?